नायक भएर दुनियाको छोरीको पैसा र बै,शमा म,स्ती गर्ने ? युवती पनि तेस्तै राम्रो लाग्यो भन्दैमा बिस्तरामै लाने ? (भिडियो सहित) | भिडियो
April 18, 2021 NepstokLeaveaComment on नायक भएर दुनियाको छोरीको पैसा र बै,शमा म,स्ती गर्ने ? युवती पनि तेस्तै राम्रो लाग्यो भन्दैमा बिस्तरामै लाने ? (भिडियो सहित)
माटो बिनानै कृषि खेति ,माटोभन्दा दस गुणा बढि उत्पादन ,बिदेशि नागरिक पन्ध्र बर्षदेखि नेपालमै यस्तो खेति गर्दै ,यसरी गर्नुस् (हेर्नुस् भिडियो )